Hirshabeele oo deegaanadeeda kasoo saartay kormeerayaashii imtaaxaadka ee kasocoday wasaaradda waxbarashada Somalia.
May 17, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Somalia, Wararka Maanta 2
Kadib markii uu madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Awaare uu amar ku bixiyay inay ka baxaan degaamadasii kormeerayaashii ka socday wasaaradda waxbarashada federaalka ee imtixaanka Shahaadiga ayaa maanta waxaa Jowhar ka baxay Kormeerayaashaas.
Kormeerayaashan ayaa muddo saddex maalmood ah waxay kormeerayeen imtixaankii dugsiga sare oo dowladda federaalku joojisay kadib markii maadooyin ka mid ah imtixaanaadka lagu faafiyay baraha bulshada. iyadoo joojinta imtixaankaasi ay ka dhalatay mudaharaadyo looga soo horjeedo wasaaradda waxbarshada iyo sida ay u maaraysay imtixaanka.
Sidoo kale, Kormeerayaasha ayaa ka baxay Magaalooyinka Beledweyne, Buulo Burde iyo Balcad oo dhammaantood hoos yimaada maamulka Hirshabelle.
Dhinaca kale, Maamulka Jubbaland oo degaamadiisa ay saamaysay imtixaankii shahaadiga ah ee la joojiyay ayaa guddi u xilsaaraya arrimaha imtixaankaasi oo la filayo in mar labaad la qabto 28 bishan May 2019.
Dhinaca kale, Maalinti beri ah oo ku beegan 18 May waxaa degaamada Puntland ka qabsoomi doonaa imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dhexe oo ay soo diyaarisay wasaarada waxbarashada Puntland.
Anigu ma hubo khilaafka waxa dhaliyay laakiin si kasta oo ay ahaato ba ma aha masalo u qalanta in ay maamul goboleed iyo dawladda federaalka gorodda isu galiso waayo hannaanku waa mid federaali ah ee maamullada u saamaxaya in ay siyaabo hoose oo baahiyadooda waafaqsan wax u nidaamsadaan.
Cabsida weyn ee aan anigu qabo waxaa weeyaan in dawladda federaalka ay deeq bixiyeyaasha reer Galbeedka ahi ku khasbaan in manhajka tacliinta lagu soo biiriyo maddada hadda ay gaaladu duulineyso ee caruurta lagu barayo dhaqanka faxshiga ah ee qowmu luudnimada, sida Hargeysa ba ka dhacday. Maamulladu waa in ay xukuumadda sare toos uga diidaan qorshe noocan oo kale ahi.
Caqli xumo wataa meeshii ay wasiirkooda oo wiilkooda ahaa garab istaagi lahaayeen si uu ugu cadaalad falo caruurtoodii in aan laga badsan darajooyinka maadooyinka imtixaanka oo sida beenta ah ee mooryaantii imtixaanka bixisay ay iskuuladooda qishka siiyeen ayay noqdeen kuwii dagaalka ugu xun ku qaaday ileyn doqon hiil ma leh Beledweyne maxaa caqli xumo iyo talo xumo taala inay mooryaanta barteen ayaa loo heestay laakiin waxba uma kordhin